Ngingathanda ukukhuluma ngeteknoloji enhle kangaka, njenge-Skype. Ivula amathuba amakhulu kulabo abaphoqelelwe ukuba bakhulume kude. Kodwa akuwona wonke umuntu okwazi ukufaka kahle i-Skype kukhompyutha nokuhlelwa kwayo okulandelayo.
Umlando wokudala ubuchwepheshe be-Skype ubuyela emuva ngo-2003. Umthuthukisi omkhulu we-Skype ngu-Swede Nicholas Zennström. Ngaphezu kwalokho, abahleli base-Estonia bahlanganyela ekuthuthukisweni. I-Skype ekuqaleni yayihlelwe njengenhlelo yokukhulumisana ngezwi, yayine-interface elula, enembile. Ngezinguqulo ezintsha ezalandela, lolu hlelo "lukhulu" nemisebenzi ehlukahlukene ekhulisa kakhulu amandla ayo.
I-Skype iyinhlelo yamahhala noma yimuphi umsebenzisi angalanda. Ihlinzekwa kuzinhlelo ezihlukahlukene zokusebenza, kufaka phakathi amaselula. Nge-Skype, ungenza amakholi wevidiyo, kodwa lokhu kukhetho kutholakala kuphela kulabo abasebenzisi abanayo ikhamera yewebhu. Ngaphezu kokusetshenziswa kwendabuko, ungadlulisa amafayela kanye nemiyalezo.
Ukufakwa kwe-Skype kufana nokufakwa kwezicelo ezivamile. Ukulanda uhlelo, hamba kuwebhusayithi yomkhiqizi, udlule ngokubhalisa okulula, okuzodinga esikhathini esizayo, ukhethe uhlelo lokusebenza bese ulanda umfakisi. Okulandelayo, sebenzisa ifayela lokufaka, bese uqala ukufaka mahhala kwe-Skype. Lolu hlelo ngokwayo luyonquma ulimi lwesistimu yokusebenza futhi luzokwenza ukuba ufake inguqulo efanele ngokuzenzakalelayo. Kumenyu yokufaka, phawula izinto ezidingekayo zokufaka bese uchofoza inkinobho ethi "Ngiyavuma-Faka". Ungakwazi ukugubha inqubo yokufaka ngendlela efanekayo yokudweba, akudingi ngaphezu kwemizuzu embalwa ngesikhathi.
Ngemuva kokufakwa kwe-Skype, uhlelo luzoqala. Khumbula, ubhalisiwe kuwebhusayithi yomkhiqizi? Kuzodingeka ukhumbule ukungena ngemvume nephasiwedi yakho, oyifake. Le datha kufanele ifakwe efasiteleni le-Skype, ngemuva kwalokho ungangena ngemvume ku-akhawunti yakho, equkethe oxhumana nabo nomlando wokuxhumana.
Iwindi lamalungiselelo okuqala azoba namacebo mayelana nokulungiswa okulungile kwalolu hlelo, okulandelayo, uzoshintsha ukusebenza komsebenzi ngendlela engcono kakhulu.
Amagama ambalwa mayelana nezinzuzo ezivela kulobu buchwepheshe.
Okokuqala futhi okubaluleke kakhulu, i-Skype iyintuthuko yamahhala. Lokhu kusho ukuthi udinga nje ukulanda uhlelo lokusabalalisa , ukufaka bese uqala ukusebenzisa cishe zonke izici.
Okwesibili, ukuba khona kwevidyo izingcingo ngokuyinhloko kuletha i-interlocutor eduze.
Phakathi kwezinye izinto, i-Skype inekhono lokudala amakholi weqembu.
Sebenzisa uhlu lwakho lokuthintana kusuka ku-Skype, ungakwazi, kusuka noma yikuphi emhlabeni, ngokufaka iphasiwedi futhi ungene ngemvume ohlelweni kwenye ikhompyutha.
Nge-Skype, ungenza izingcingo kumakhalekhukhwini wonke emhlabeni, kodwa isici esikhokhelwayo. Kodwa-ke, intengo yamakholi kwamanye amazwe ngumyalo wokuphakama okuphansi kunama-opharetha weselula.
Uma udinga ukufaka i-Skype kwikhompyutha yakho mahhala, isihloko esenhla cishe sibonakalisile ngokuphelele lesi sihloko.
Indlela yokuhlanza i-disk kusuka kumafayela angadingekile.
Uhlelo lwekhamera ye-laptop
I-best accelerators yekhompiyutha
Indlela yokubuyisela ibha yolimi ku-Windows 7. Yini okufanele uyenze uma ibha yolwimi linyamalalala ku-Windows 7
Indlela yokwenza i-Opera i-default (ingu-11 no-12)
"Toyota uNowa": incazelo models, izici zabo kanye nokubuyekeza
Elisezingeni likakaputeni isikhundla 1st: umlando, izimpumelelo ezizibeni ehlombe
Basil Poyarkov - Umhloli wamazwe Russian: Biography, ukuvulwa
Izimali kaMasipala abaqashi. Umthetho okusalungiswa osomabhizinisi ne ekamu ukuqeqeshwa